Kutsamira kweInbound Kushambadzira Sarudzo | Martech Zone
Mugovera, June 15, 2013 Mugovera, June 15, 2013 Douglas Karr
Isu tanga tichitaurirana nevatengi vakakura uye vadiki kwemwedzi yakati wandei ikozvino uye tinotenda chaizvo kuti pane zvimwe zvipenga mumazano mazhinji uye yakawanda hype nevamwe. Vatengi vedu pavanenge vachinetseka, isu tinowanzoona kuti pane mukaha mukutsamira kwakakosha kwekushambadzira kwavo kwese. Zano rakabudirira rekushambadzira risingabatanidze kushambadzira, outreach or budiriro yenharaunda - asi zvinowanzoenderana navo.
muchiso - hazvigoneke kuve neinobudirira inbound yekushambadzira zano kana iwe usina kuenderana kutarisa uye kunzwa, yakasimba mameseji uye izwi kune yako kambani, zvigadzirwa uye masevhisi. Vanhu vanofanirwa kukuziva uye vanzwisise mabatsiro avanobva kwavari.
simba - kusvitsa kunowanzoonekwa sekuedza kwehukama neruzhinji asi kuwedzera vateereri vako nekutsvaga vamwe online kwakakosha. Vazhinji venhau venhau vanhu vanongokuudza iwe kuti iwe unovaka vako vateereri. Sei iwe uchiita izvi kana mumwe munhu atove nevateereri? Enda unovawana!
Community - curating uye kukura vateereri munharaunda inobudirira inoda yakasarudzika zvemukati zano, yakawanda yekutarisisa, uye ine tarenda timu. Nekudaro, kana iwe uchinge wawana nharaunda - iwe une uto revashambadzi. Icho chitsvene chidimbu chezvemagariro midhiya!
Kutendeuka - isina chaiyo kuitiswa kwe analytics, optimization uye kuyedza, hausi kuzokwanisa kushandura zvinotungamira zvaunazvo kuva vatengi. Kuziva, kuyera uye kugadzirisa nzira yako yekubatana kwakakosha.
Akawandisa ekushambadzira masangano anonyanya kunetseka nezvekuwana mugove wavo webhajeti rekushambadzira uye ivo vanowanzo sundira makambani munzira yavo. Dambudziko nderekuti aya akafanana nemakumbo patafura… kana iwe ukadhonza imwe, dzimwe dzinoita shoma. Kana isu tichishanda nemutengi, isu tinowanzo simbirira kana kuvamanikidza kuti vashande navo branding masangano, mafemu ehukama neruzhinji uye budiriro yenharaunda makambani.
Kunyangwe isu tiri 100% inoshanda, pasina chero chimwe chezvimwe zvinhu, iyo yakawandisa yekushambadzira zano haina kushanda. Kuve nechokwadi chekuvimbika kwega kwega kunoitwa nemazvo kunopa kambani ine hukuru hwekushambadzira kusvika, kugona uye kuita.
Jun 17, 2013 pa1: 39AM
Yakanyanya inoshanda Isu yekutengesa. Pane yekushambadzira nzvimbo zano rakanyanya kukosha kuti ubudirire. Ndinovimba chinyorwa chako chichandibatsira zvakawanda !!
Jun 17, 2013 pa6: 49AM
Yakanaka post Doug! Ndainyanya kuda posvo apa .. Thanks for sharing…